Nzira yekuita sei kumba peji SEO yewebsite yangu?
Pamba pekutanga ndiyo chikamu chinokosha chewebsite. Inogona kushandiswa kune zvimwe zvinangwa zvakasiyana. Iyo inoshanda semutungamiri wekutanga wepaiti yako uye inovapa kunzwisisa kwakajeka kwekuti nzvimbo yako ndeyei. Peji yako yepamusha inogona kukwezva mitsva itsva kana kurasikirwa nemukana. Ndokusaka zvakakosha kuti webhusaiti yako pakarepo inopa bhizinesi rako nenzira yakanakisisa.
Sezvo iri peji rinowanzoshanyirwa pawebsite yako, inofanira kunge yakanyatsogadziriswa uye yakashandiswa nevashandi. Iko inofanira kugovera zvinangwa zvebhizimisi rako, maitiro, uye hutumende kupa vashandi vako vangave kunzwisisa kwakananga kwekambani yako uye kuvamise vakavimbika kune cheki yako. Uyezve, inofanira kutaurirana zvakananga kune vashandisi vepawebsite yako kuti zvigadzirwa zvako kana mavhisi angave anokosha kwavari. Uyezve, unofanirwa kuratidza kero chaiyo yekambani yako, nhamba yefoni, uye e-mail pane rako rekumba kupa vashandi vako zvingave zvavanoda pakutanga chokutanga. Muchikamu chino, tichakurukura nzira yekuita SEO yewebsite uye kugadzirisa peji remba.
SEO ndiyo nzira yekugadzirisa nzvimbo yako kune injini yekutsvaga. Kana iwe wepaiti yako yakagadzirirwa zvakanaka uye isingatakure chero kukanganisa mukunyoresa, peji yako yepamusha ingangodaro yakakosha zita rako rebhizimisi uye marimi. Kunyange zvakadaro, kana zita rako rekinyorwa ndiro keyword users vanoshandisa semibvunzo mubhokisi rekutsvaga, rinova rakasiyana zvakasiyana. Iwe unogona kutarisana nekwikwidziro yakakwirira yezita rako rewebsite.
Zvisinei, pane nzira dzakawanda dzingaita kuti uvandudze SEO mamiriro ako ezvo nekukwezva unhu hwepamusoro kuburikidza nejiji chemuzinda wako. Kuti uone kuti une unhu uye SEO-friendly friendly home, uye unogara uchifunga, unoda kutevera mirayiridzo yedu iri nyore. Saka famba nematanho aya uye iva nechokwadi chokuti wapedza mumwe nomumwe wavo.
Chokutanga pane zvose, ita nechokwadi chekuti peji yako yepamusoro inotarisa zita rako kana marimi iwe unotengesa. Mushanduri anozarura nzvimbo yako inofanirwa kuziva kubva pakuona kwekutanga kana michina yako kana maitirwo akazadzisa zvaanotarisira kana kwete.
Kuti uise pfungwa pamushandi wako uye uite kuti zviyekekwe, unogona kuwedzera chikwangwani chinokwezva uye chinozivikanwa mukona yepamusoro kuruboshwe rwemaji yako. Uyezve, ita kuti uve nefoni yakajeka-iyo-iyo inoshandisa vashandi mukutenga, kuraira kana kubhadhara.
Unofanirwa kuita kuti peji rako rekugara rive nyore nyore kufamba uye kushandiswa kwevashandi sezvo iri danho rokutanga rekufamba kwavo kuburikidza nemapeji ako epaiti. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti menyu yako yakanyatsogadziriswa, uye pane zvese zvinodiwa zvitsva paji reimba yako.
Kuvandudza nzvimbo yako yekutsvaga nzvimbo uye kukwevera kune imwe nzira inotarirwa, unofanirwa kuita kuti yako yekushandura peji yakagamuchirwe kumafoni. Yakave yakakosha yeGoogle nheyo kubva muna 2015, saka nzvimbo dzose dzepaIndaneti dzakashambadza zvikwereti zvinoshamwaridzana.
Iva nechokwadi chekuti meta tsanangudzo dzako dzinozadzwa, zvekuti inotaura nezve USPs yako uye inokwezva vatengi vanogona kune yako nzvimbo.
Zvinokurudzirwa kusachengetedza pamba yako yepamba ine nhamba yezvibatanidza. Iwe unofanirwa kuchengeta vashandisi kuisa pfungwa pahukuru hwemashoko uye usavhiringidza pfungwa dzavo kubva pazviri.
Zvakagadziriswa pamba rako rinofanira kunge zvakakosha kune bhizinesi rako uye zvine bhizinesi rekuita sarudzo. Paunenge uchiita zvinyorwa newebsite yako yepeji yepamusoro, tsvaga pane zvakanyanya kutarirwa, kwenguva refu-tailed keywords kuti uite chete ruzivo rwehutano kunzvimbo yako iyo inogona kutendeuka kukutengesa. Uyezve, unofanirwa kuita kuti zvinyorwa zvako zviri nyore kuverenga uye zvakarongeka zvakanaka. Kuti uite kudaro, iwe unogona kushandisa mazita akazara uye misoro Source .